Imigaqo neMimiselo yeVPS FXCC
Ikhaya / Imigaqo neMimiselo yeVPS
Iseva yangasese yangasese ('VPS') iMigomo neMigangatho yeNkonzo
Ngaphambi kokucela i-VPS, iKlayenti kufuneka ifunde imimiselo engezantsi kunye nemeko ngokubanzi kwaye iqonde umxholo wayo.
Umxhasi uyaqonda kwaye uyavuma ukuba:
Iseva yangasese yangasese ('VPS') iphethwe kwaye ilawulwa ngumniki-ntengiso wesithathu ('BeeksFX') ohlukeneyo kwaye ozimeleyo kwiFXCC.
I-FXCC inika le Nkonzo yeVPS 'njengokuba' kwaye ayikwazi ukuqinisekisa ukuba inkonzo ayikhululekile nayiphina impazamo okanye ukungasebenzi.
I-FXCC ayiyi kwamkela nayiphi na imbopheleleko okanye uxanduva, naliphi na ukungasebenzi okanye iphutha leenkonzo zeVPS kuquka, kodwa kungaphelelanga, ukuxhatshazwa kwenethiwekhi, ukuhluleka kwedatha okanye iimpazamo zenkqubo.
I-FXCC ayiyikulawula ukucwangciswa kweVPS okanye ukuthembeka kwayo.
I-FXCC ayiyi kuba noxanduva lwalo nawuphi na urhwebo okanye enye ilahleko uMthengi angayifumana ekusebenziseni inkonzo ye-VPS.
'Iimigomo neemeko' ziya kubophelela kumaqela ade anqunywe yiqela.
Umxhasi obambe iVPS unokuphelisa inkonzo ekupheleni kwenyanga yekhalenda kwaye isaziso sokuphelisa kufuneka sithathwe ubuncinane iintsuku ezintathu zokusebenza (3) ngaphambi kokuphela kwenyanga.
I-FXCC inelungelo lokunqanda, ukumisa okanye ukuphelisa inkonzo ye-VPS, nangaliphi na ixesha nangasiphi na isizathu, ngokwengqiqo yedwa ye-FXCC, kwaye iya kwazisa umxhasi.
Umthengi ngamnye uvumelekile kwi-VPS enye (i-1) i-VPS kungakhathaliseki ukuba yintoni inombolo yeakhawunti yakhe yokurhweba ebanjwe nge-FXCC.
I-FXCC inelungelo lokuchibiyela, ngezikhathi ezithile, nayiphi na inxalenye 'yeMigomo nemeko' njengoko kubonwa kuyimfuneko.
Umboneleli ngenkonzo ('BeeksFX') lizibuko lokuqala lokufowuna kuyo yonke imiba yobuchwephesha.
Abaxhasi be-FXCC ngeemeko zilandelayo banelungelo lokufumana KWEENKONZO ZENKCUBO YEZIKOLO:
Yenza idiphozitsha entsha kwaye ugcine ubuncinane be-$ 2,500 (okanye imali elinganayo).
Umlinganiselo omncinci wenyanga wezorhwebo we30 uhambo olujikelezayo olujikelezayo.
Ukuba zombini iimeko ze-12 (a) kunye ne-12 (b) ezingasentla zihlanganiswanga rhoqo ngenyanga ziya kubakho umrhumo we-server we-30. Ngaphandle kokuba uMthengi ukwazisa ngokucacileyo i-FXCC ukuba le nkonzo ayidingekanga.
Naliphina iirhafu ezihlawulwe kwiNkonzo ziya kuncitshiswa kwi-akhawunti yomthengi akhawunti ekuqaleni kwenyanga elandelayo yekhalenda.
Ngokuqhubeka nesicelo senkonzo yeVPS, uyavuma ngokuzenzekelayo 'Imigomo neemeko' ezingentla.